Ulwazi ezinkundleni zokuxhumana lungadala umonakalo - EU - Bayede News
USomaqhinga Omkhulu we-European Union (EU) uthi isehlakalo sangesonto eledlule sokuhlaselwa kwenhlokodolobha yase-United States of America (USA) siveze ubungozi bokudedela ukucindezelwa nokungahlonishwa kwenqubo yentando yeningi kanye nokudedela ukusabalala kolwazi olungelona iqiniso ezinkundleni zokuxhumana.
“Lokho esikubone ngesonto eledlule kube uvuthondaba olukhulayo futhi oluthusayo emhlabeni jikelele kule minyaka edlule. Kufanele sivuke emaqandeni, kufanele abamele intando yeningi basisebenzise lesi sehlakalo ukuze baphaphame,” kusho umphathi wengqubomngomo yezangaphandle we-EU uMnu uJosep Borrell (osesithombeni).
Uqhube wathi: “Wonke umuntu kufanele azi ukuthi uma samukela izingqinamba njalo ngisho kungathiwa zincane kanjani, intando yeningi nenqubo yayo kanye nezakhiwo zayo kancane kancane kungagcina kufadalala.”
UMengameli waseMelika uDonald Trump okuthe kuleli sonto walahlwa yivoti ngecala lokgqugquzela ukuvukelwa kombuso kulandela ukuthi egqugquzele abaseki bakhe ukuthi bagasele inhlokodolobha ngaphansi kwezizathu ezingelona iqiniso zokuthi wehlulwa okhethweni lwangoLwezi nyakenye ngenxa yokukhwatshaniswa kwamavoti.
Ukugasela kwababhikishi abeseka uTrump kudlule nemiphefumulo yabantu abahlanu.
“Uma abantu bebengakholwa lesi sehlakalo saseWashington siyakhombisa ukuthi ukusatshalaliswa kwamanga kuwusongo olukhulu entandweni yeningi,” kusho uBorell.
Uqhube wathi: “Uma umuntu ekholwa ukuthi ukhetho belunokukhwabanisa ngenxa yokuthi umholi wabo ubatshele lokho ephindelela abantu bagcina sebekukholwa lokho bese beziphatha ngendlela ababhikishi abaziphathe ngayo.”
UBorrell uphakamise ukuthi kufanele kuqiniswe inqubo kwezokuxhumana futhi wathi lokhu angeke kwenziwe izinkampani.
Inkundla yokuxhumana ikhethe ukuvala i-akhawunti kaTrump yaphakamisa ukuthi ukuvulwa kwayo kugqugquzela ukusabalaliswa nokugqugquzelwa kodlame.
UTrump njalo usebenzisa inkundla yokuxhumana uTwitter kanye nezinye ukuphakamisa iphuzu lakhe lokuthi ukhetho lwakhwatshwaniswa kodwa ukusho lokhu akanabufakazi.
Ngenyanga edlule iSigungu Esiphezulu se-EU siphakamise ukuthi kube nemithetho eqinile ebhekana ngqo nezindaba ezingamanga ezinkundleni zokuxhumana. Lokhu kuzophoqa ukuthi kubhekwe okuqukethwe okungekho emthethweni kanye nokuzama ukudukisa kwamabomu.